जान्नुहोस अदुवाको फाइदै फाइदा - नवयुग
जान्नुहोस अदुवाको फाइदै फाइदा
December 22, 2019 December 22, 2019 by nawayuga
सबैजसो नेपालीको भान्सामा पाहिने एक अचुक औसधी हो अदुवा। हामीले सामान्य लिने गरे पनि अदुवा गुणका हिसाबले त्यस्तो साधारण मसला हैन। सन्तुलित रूपमा यसको उपयोग गर्न सके हाम्रो स्वास्थ्यका लागि यो प्रकृतिप्रदत्त महौषधि नै हो। स्वादमा पिरो हुने अदुवा पाचक गुणले भरपूर हुन्छ। यसले हाम्रो पाचन प्रणालीलाई बलियो बनाउँछ। यसको नियमित सेवनले भोक बढ्छ। ग्यासको समस्याबाट छुटकारा पाइन्छरु। पेटको समस्यामा समेत यो धेरै फाइदजनक मानिन्छ। खाना नपच्दा मात्र हैन, पाचन प्रणालीमा सुधारका लागि समेत यसको उपयोग गर्नु बुद्धिमानी मानिन्छ।
चिडचिडोपन हटाउन यो अचूक मानिन्छ। आयुर्वेदले यसलाई पीडानाशक, वायु–कफनाशक पनि भनेको छ।
यद्यपि अदुवाको उपयोग बाह्रै महिना हुने गर्छ, तथापि यो न्यानो प्रकृतिको हुने भएकाले जाडोयाममा बढी खाने गरिन्छरु। ताजा वा सुकेको (सुठो) दुइटै किसिमले प्रयोग गर्न सकिने अदुवा शक्तिशाली ‘एन्टिभाइरल’ त हुँदै हो, यसमा क्याल्सियम, आयोडिन, आइरन, क्लोरिन, भिटामिनसहित अन्य थुप्रै पोषकतत्व पनि पाइन्छन्।
मौसमी रुघाखोकी लागेका बेला अदुवाको उपयोग रामवाण मानिन्छरु। यसले हाम्रो रोगप्रतिरोधी प्रणालीलाई बलियो बनाउँछ। यो अत्यन्त राम्रो एन्टिअक्सिडेन्ट पनि होरु। यसले फ्री ¥याडिकल्सबाट निकै प्रभावकारी सुरक्षा दिने गर्छ। यसो हुँदा हामी थुप्रै रोग लाग्नबाट जोगिन्छौं।
अदुवाको उपयोगले कोलेस्ट्रोललाई नियन्त्रित गर्छरु। रक्तचाप नियन्त्रणमा राख्न सघाउँछ। यसमा पाइने क्रोमियम, म्याग्नेसियम र जिंकका कारण रक्तप्रवाह राम्रो हुन्छ। यसले रक्तसञ्चारलाई पनि राम्रो गतिमा राख्छ। अदुवा नियमित रूपमा खाने गर्दा रगत जम्न पाउँदैनरु। त्यसैले अदुवा सधैं खाने मानिसलाई हार्ट अट्याक र स्ट्रोकको जोखिम निकै कम हुन्छ।
चिनिया“ चिकित्सा पद्घतिमा मुटु रोगको उपचारमा अदुवाको धेरै महत्व छरु। यसमा ढुसीनाशकसँगै क्यान्सरप्रतिरोधी गुणसमेत हुन्छ।
मधुमेहबाट हुने जटिलता हटाउन अदुवाको सेवन लाभदायक हुन्छ। यस्तो अभ्यासले मधुमेहीका मृगौला, कलेजो र केन्द्रीय स्नायु प्रणाली सुरक्षित भइराख्छन्रु। मधुमेहपीडितको आ“खा बिग्रिनबाट पनि जोगिन्छ।
अदुवाको नियमित सेवनले शरीरको छाला स्वस्थ र चम्किलो हुन्छ। छालामा निखार आउँछ, चाउरी पर्न पाउँदैन।
कोलेस्टेरोल भनेको के हो, कसरी बढ्छ ? खराब कोलेस्टेरोल घटाउने ६ खाना यी हुन्
पुरानो भन्दा पुरानो वा जिद्धी दादलाई ३ दिनमै निर्मुल पार्ने यो चमत्कारिक घरेलु औषधी, जानीराखौँ
यी सात खानेकुरा खानाले आफैं घट्छ पेटको बोसो
Prevपुरानो भन्दा पुरानो वा जिद्धी दादलाई ३ दिनमै निर्मुल पार्ने यो चमत्कारिक घरेलु औषधी, जानीराखौँ
Nextयी सात खानेकुरा खानाले आफैं घट्छ पेटको बोसो
January 7, 2020 January 7, 2020 by nawayuga
कमाएर मात्र हैन वचत गरेर धनी बनिन्छ, पढ्नुहोस् वचत गर्ने उपाय
January 6, 2020 January 6, 2020 by nawayuga
छोरी हाम्रा गर्व
दर्पण एफ एमका अध्यक्ष अधिकारीद्धारा जन्मोत्सवको अबसरमा बिद्यार्थीहरुलाई न्यानो कपडा बितरण
December 21, 2019 December 21, 2019 by nawayuga
December 20, 2019 December 20, 2019 by nawayuga
सी जिनफिङको संघषपूर्ण जिवन
बनायो राजपाले राष्ट्रिय सभा निर्वाचन संयोजन समिति
प्रचण्ड भन्छन: अबको निर्वाचनमा नेकपा बाहेक कसैले जित्दैन
December 29, 2019 December 29, 2019 by nawayuga
साझा युवा संगठनद्वारा दुर्घटना न्यूनीकारण तथा सचेतना मुलक कार्येक्रम सम्पन्न
September 3, 2016 by nawayuga
कम्प्युटरबिनै कम्प्युटर शिक्षा
माघ ६ गतेसम्मका लागि स्थगित प्रतिनिधिसभा बैठक
प्रदेश ३ को नाम वाग्मती,राख्ने प्रस्तावको पक्षमा दुई तिहाइ मत
इरान विमान दुर्घटनाः इरानी क्षेप्यास्त्र प्रहारबाट युक्रेनी विमान खसेको प्रमाण भेटिएको पश्चिमा देशको दाबी
पृथ्वीनारायण शाह: मृत्युको कारण ‘बाघको आक्रमण’ कि रोग?
इरान: जहाँ नेपालले दूतावास खोलेर बन्द गरेको थियो
CSS Animation (9)
Nawayuga©All Right Reserved